एसइईको प्रश्नपत्र आउट गर्ने सार्वजनिक प्रहरी र शिक्षकको मिलेमतो ! - Triveni Online
Home / News / एसइईको प्रश्नपत्र आउट गर्ने सार्वजनिक प्रहरी र शिक्षकको मिलेमतो !
Triveni Online 1 week ago	News Leaveacomment
काठमाडौं, २१ चैत । प्रदेश नम्बर दुईमा माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को प्रश्नपत्र परीक्षाअगाडि नै सामाजिक सञ्जालबाट आउट गराएको आरोपमा प्रहरीले जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ परेका दुई प्रहीसहित ६ जनालाई बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो । पक्राउ पर्ने प्रहरी जवान सप्तरीको राजविराज–१० का ब्रम्हदेव सुनरैत र कञ्चनरुप–६ का दीपेन्द्रकुमार मण्डल छन् ।
उनीहरू सिरहाको इलाका प्रहरी कार्यालय, कल्याणपुरमा कार्यरत थिए । पक्राउ पर्ने अन्यमा विष्णुदेव यादव, शिक्षक मनोज यादव, राजेश यादव र उमेश यादव छन् । इप्रका, कल्याणपुरमा जनता मावि बनिया र रादु मावि कल्याणपुरको प्रश्नपत्र राखिएको थियो ।
जसको सुरक्षार्थ खटिएका जवान नै प्रश्नपत्र लिक गराउने कार्यमा संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो । प्रदेश २ मा चैत १४ गते अनिवार्य विज्ञान र १५ गते सामाजिक अध्ययन विषयको प्रश्नपत्र बाहिरिएको थियो । परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि प्रदेश २ मा स्थगित गरिएको परीक्षा यहि २२ गते शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ । via~nepaliheadlines
Previous स्वास्थ्यका लागि अमृत हो पुदिना, जान्नुहोस यसका फाइदा | सक्दो सेयर गराैं !!!
Next दुखद खबर…